Thursday February 27, 2020 - 21:44:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dowladda Federaalka ayaa markale lagu dhaleeceeyay siyaasadda ay dowladda Kenya ku taageerayso maamulka isku magacaabay 'Jubbaland' ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo.
Dowladda Farmaajo ayaa dowladda Kenya ku dhaliishay faragelinta dhanka siyaasadda ah balse waxay ku ammaantay kaalinta ay ciidamadeedu ka qaadanayaan duullaanka dowladaha shisheeye kusoo qaadeen dalka Soomaaliya.
Warka kasoo baxay Villa Somalia ayaa umuuqda mid gabi dhaclaynaya oo aan mowq rasmi ah ka qaadan faragelinta Kenya ee soo laalaabatay.
Waxaa xusid mudan in madaxda dowladda Federaalka aysan waligood wax cambaarayn ah ujeedin dowladda Kenya oo ku aaddan xasuuqa ay ku hayso xoola dhaqatadii ay ku xasuuqday gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
arrintan ayaa imaanaysa xilli boqolaal askari oo daacad u ah Axmed Madoobe ay dowladda Kenya gaysay duleedka Beled Xaawo.